Oge Ọgụgụ: 4 nkeji Ọ bụrụ na nke a bụ gị oge mbụ njem ụgbọ okporo ígwè, e doro anya na ọ ga-nke mbụ n'ime ọtụtụ. n'eziokwu, onye ọ bụla nke na-nyere njem ụgbọ okporo ígwè a ohere wee wezuga crazy n'ime ya! Gịnị? N'ihi na ọ bụ ebube! N'adịghị ka ihe na-abụghị onye ụgbọelu agafe, iru ala ụgbọ ala tours…
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji Ina njikere na-blown pụọ na Italy ụgbọ okporo ígwè site na oge ị na kwụpụ ụkwụ n'elu ya oké ala. The n'ala akụkọ ihe mere eme, ebube ije, karịrị omenala na ndị dị otú ahụ mara, ọkaibe na ọma-mannered ndị mmadụ ga-abụ ihe ị ga-echeta ruo gị n'ụbọchị ikpeazụ!…